Lalam-pirenena faha-44 Efa manomboka ny asa, haharitra 18 volana
Efa manomboka ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-44 mampitohy an’Antananarivo amin’Ambatondrazaka amin’izao fotoana, hoy Ramandehamanana Richard,
governoran’ny faritra Alaotra Mangoro. Ao anatiny tanteraka ilay orinasa sinoa nahazo ny tolo-bidy raha ny fanazavany, asa haharitra 18 volana. Efa miroso tanteraka amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana any amin’iny lalam-pirenena iny ihany koa ankehitriny ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Raha nalaza tamin’ny resaka sakan-dalana teo aloha teo ny lalam-pirenena faha-44 dia efa milamindamina ankehitriny. Mirotsaka an-tsehatra eny amin’ireo faritra mena mantsy ny mpitandro ny filaminana, hoy hatrany ity governora ity raha tsy afa-misaraka ihany koa amin’ny alina ireo taksibrosy avy eto an-drenivohitra sy ny miakatra fa tsy maintsy manao andiany, miaraka amin’ny mpitandro ny filaminana. Misy ny fivoriana tanterahina etsy amin’ny Carlton Anosy nanomboka omaly hanatanteraka ilay politikam-panjakana momba ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hipaka eny ifotony. Anisan’ny mandray anjara amin’izany ity governora iray ity.